Hiran State - News: Wararkii ugu danbeyey dagaaladii maalmahanika socday duleedka magaalada belet weyne.
Wararkii ugu danbeyey dagaaladii maalmahanika socday duleedka magaalada belet weyne.
Arbaco 16,Maarso 2011(HSOL)-Kedib dagaalo is daba joog ah oo maalmahani ka socday duleedka magaalada Belet weyne ayaanu isku dayney sida ay shacabka ku dhaqan magaalada Belet weyne u arkaan iyo in uu wax isbedel ah ku yimid howlahii iyo ganacsigii magaalada dhawrkii maalmood ee ina dhaaftay.
Hadaba war bixino kala duwan oo aanu ka soo aruurinay shacabka ku nool magaalada Belet weyne iyo nawaaxigeeda iyo waliba saraakiil ka tirsan ciidamada rasmiga ah ee ay shacabka Hiiraan ku kalsoon yahiin iney la waregaan magaalada Belet weyne iyo guud ahaan Hiiraan ee ku dagal gala magaca ciidmada Hiiran.
Shacabka Magaalada Belet weyne iyo sababta keentay iyadoo dagaal socdo iney howlahooda shaqo iska wataan oo aysan kala jecleyn in dagaal socdo iyo in kale.
Magaalada Belet weyne waxaa ku nool shacabka ugu badan Hiiraan marka loo eego magaalooyinka waaweyn ee Hiiraan sida Bulo Burte, jalalaqsi, iyo waxii la mid ah. dagaalo maalmahani socday iyo bal sida ay u arkaan shacabka ayaanu dulmar guud ku sameynay inagoo ka bilaawnay shacabka magaalada Belet weyne.
Waxeyna jawaabtoodii oo sax ah noqotay ineysan dhaceyn dhicina doonin koox aan wadanin magaca Hiiraan amaba aan ka turjumeyn rabitaanka shacabak Hiiran ineysan qabsan doonin magaalada Belet weyne amaba Feer Feer haka soo duulaano amaba Galgaduud saldhig haka dhigtaano oo magacyo diin hala baxaane.taasi bedelkeeduna hadiiba Hiiraan ay koox heysaneyso kuwa hada heysta waxbo kama duwana kuwa weerarka ku soo ah magalada ujeedadooduna waa in kooxda Feer Feer ka soo duushayne ay doonayaan iney Isbaaro u dhigtaan shacabka oo ay iyagoo aysan jirin meel ay ka taliyaan jidka dheer dhigtaan Isbaaro.
Kuwa kale ee iyaguna Saldhigoodu yahay Galgaduud oo ay ku tilmaameen koox iyaguna dowlada federalka ah kula jira tartan siyaasadeed oo doonayo iney qabsadaan magaalada Belet weyne si ay ugu gor gortamaane iyaguna kama yeeli doono iney na qabsadaan ayuu yiri nabadoon caan ah oo ku sugan duleedka magaalda Belet weyne. hadiiba buu yiri uu ciidan na qabsanayo waxaan na qabsan doona oo aanu marka ay magaalada yimaadaan biyo iyo waxkasta kala hortagi doonaa kuwa ku dagaalamaya magaca ciidamada reer Hiiraan oo aanu ognahay waxa ay doonayaan iney tahay uun gobanimo u dirir iyo sidii ay shacabkooda uga xoreysan lahayeen kooxdaan hada heysta ee argagixisada ah, laakinse ninkani ka midka ah waxgaradka Hiiraan ayaa yiri kooxdaan hada na heysato dhibkeeda waanu iska iloownaa markaanu aragno kuwo hor leh oo magacyo kala duwan wata.isagoo ula jeeday in kooxdaha hada dagaalka aan wax natiijo ah laga gaarin ka hurinaya gudaha Hiiraan ku tilmaamay kuwo dano iyo siyaasado guracan wata, isagoo sii hadlayana waxuu yiri dhulkaas buuraleyda ah ayey wiilasha uun ku leyn doonaan ayuu hadalkiisa sii raaciyey.
Dagaaladii labadii maalmood ee ina dhaaftay ka dhacay duleedka magaalda Belet weyne ayaa waxaa kooxda Shabaab ka saacidayey dhinaca shidaalka iyo cuntada qaar ka mid ah shacabka magaalada oo aan iyaga wax jaceyl ah u qabin laakinse kuwa magaalada soo weerarayo ay kaka sii xun yahiin maadama dhinac kasta laga ogaaday ujeedadooda rasmiga oo ah magaaldaan qabsanay inagoo koox hebel ah iyo wax la mid ah sida ay shacabku kuu sheegayaan markad dhinac kasta kala sheegeysato.
Magaalada Bulo Burte iyo shacabkeeda
Bulo Burte shacabkeedu waa dad iyagu dhinacii ay siyaasadu u batata raaca oo iyagu hadii mar la qabsado kama soo jabhadeeyaan duleedka magaalada shacabkana awood aysan laheyn intey sheegtaan ma barakiyaan oo dagaal ku dhufo oo ka dhaqaaq ah iyagu ma jecla oo waxey jecel yahiin cidii guuleystaba iney la jaanqaadaan taasi oo keenta in inta badan aan magaalada Bulo Burte laga qaxin sida looga qaxo Belet weyne oo kale.
Jalalasqi iyo shacabkeedu.
Magaaladani inta badan shacabkeedu waxey isku fikir yahiin kuwa Bulo Burte iyo Jowhar oo sh/dhexe ah oo iyagu arintoodu waa ninkii hooyadey guursada waa adeerkey. ayey jawabtooda saxda ah noqoneysaa.
Dhinacaas iyo Ceel gaal iyo ciidamada reer Hiiraan
Ciidamda ugu badan ee ka dagaalama Hiiraan waxey ku sugan yahiin dhinaca waqooyi ee magaalda Belet weyne waana ciidamo si fiican u hubeysan tiro ahaana ma yara waana kuwa kaliya ee mark ay dagaalka si toos ah u galaan laga dareemo dagaalkooda guud ahaan magaalooyinka waaweyn ee Hiiran. ciidamdani waxey ku dagal galaan magaca ciidamada Hiiran amaba ciidamada deegaanka. ma doonayaan iney Isbaaro dhigtaan. ma doonayaan iney shacabka safarka ah dhacaan. ma doonayaan iney awoodooda mid ka baxsan isku haleeyaan. cuntada ay cunaan waa Hilib ay u qalaan dadka reer miyiga ah. hubka iyo risaasta ay wataane waa mid ay kala baxeen dhaqaalo ay ka helaan shaqsiyaad reer Hiiraan ah oo qadiyadooda aaminsan. inta badan dagaalada aan lagu mideysneyn iyo kuwa ay kooxaha magacyada kala duwan ka huraan gudaha Hiiraan amaba duleedka magaalada Belet weyne ma jecla iney ka qeyb qaataan, taasi bedelkeeduna waxey ka doorbidaan iney iskaka gaabsadaan oo aysan wax ciidan ah u dirin. taasi oo ay inta badan ku fashilmaan kooxaha magacyada kala duwan ee aan rabitaanka shacabka Hiiraan ka turjumeyn ku dagaal gala.
Ciidamdan reer Hiiraan xitaa arimahooda u gaar ah iyo qaabka uu yahay qorshahooda dagaalka uma sheegtaan dadka qaarkii lamana maqlo. dagaal aysan u diyaar garoobin ma qaadaan. waa dhalinyaro hadey baahan yahiin iyo hadey wax heystaanba ku faraxsan noloshooda oo aaminsan iney ku nool yahiin dhulkii ay u dhasheen dan kasta iyo baahi kasta oo la soo gudboonataba. waa bashaashiin marka aad ku dhex jirto wey kaftamayaan sidoo kale waxii soo gala wey isla cunaan.
Mararka qaarkood waxey dhibaato ku qabaan kooxo inta isbaaro dhigta dhaqaalahii ay heleen isku dagaala oo iyagoo isceyrsanayo mararka qaarkood ku soo dhax dhuunta kedibna ama meesha ayey ugu guuraan amaba wey kala maslaxeeyaan intii ay awoodi karaan marna xabado ayey ku kala ceyriyaan marka ay ku soo dhawaadaan kooxahaasi. waxey inta badan isku dayaan in ciidamda la mideeyo laakinse waxey su'aal ka taagan tahay nin xornimo u dirir ah oo in ciidamadu midoobaan rabo kuna dagaal galayo magaca ciidamda Hiiraan iyo mid deg degaa oo ujeedadiisu tahay uun magaalda Belet weyne ayaan qabsaday iyo Isbaaro ayaan dhigtay sida ay ku midoobi karaan xikmada ka danbeysa ii sheeg ayuu yiri mid ka mid ah saraakiisha ciidamda Hiiraan ee ku sugan meel aan sidaasi uga fogeyn tuulada Ceel Gaal.
Gunaanadkii iyo gabo gabadii shacabka Hiiraan ee ku nool magaalada Belet weyne waxey ilaa hada la yaaban yahiin inta Isbaaro ee daadsan inta ku dhaxeysa kala Beyr ilaa Feer Feer tiradooda marka maxaa u diidaya shacabka iney iska moosaan inta aysan kooxdani magaalada qabsan ayuu yiri mid ka mid ah ciidamda reer Hiiraan. waxuuna hadalkiisa ku soo qatimay walaalow bal baabuur qaado ee Kalabeyr ilaa Feer Feer ku safar kedibna hadii aan 100 dolar Isbaaro lagaaga qaadan wax ka yar 30 KM aqoonba uma lihi wiilasha dhinacaas saldhiga ka dhigtay ayuu yiri.
Hadaba waxaanu isku dayi doonaa in aanu halkaas u dirno wariye xaqiiqda jirta inooga soo warama waayo dadka degan inta u dhaxeysa Kalbeyr ilaa Feer Feer waxey soo sheegayaan isbaarooyin lagu dhaco dadka musaafurka ah oo lagaco baad ah looga qaado sida ay xaqiijinayaan inta badan shacabka magaalda belet weyne oo aanu siyaabo kala duwan ula xariirnay.
Dadku intooda badan waxey u hamuun qabaan nidam shaqeeya, deriskoo la ixtiraamo, nabada naga maqan oola wada raadiyo reer Hiiraan oo dhinac kasta ka midooba si dalka iyo dadka loo samata bixiyo. waxey ka soo horjeedaan kooxo is magacaabo. fowdada joogtada ah. Isbaarada ay qaar reer Hiiraan ka mid ah ay meherada ka dhigteen oo aan dalka intiise kale ka jirin. waxey ka soo horjeedaan wey fara badan yahiin halkaane kuma soo goobi karno.
Al soco wararka Hiiraan iyo colaadaha ka jira xaqiiqdooda saacad kasta.
· admin on March 16 2011 14:37:53 · 0 Comments · 2137 Reads ·
14,614,563 unique visits